အမေ့ခံ လူသား သို့မဟုက် မြေဇပင် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Published on Thursday, 10 November 2011 12:26 | Written by ကုလားတန် သတင်း | | | Hits: 1523
Published on Saturday, 14 July 2012 06:00 | Written by ကုလားတန် သတင်း | | | Hits: 1538
Published on Saturday, 19 November 2011 14:48 | Written by ကုလားတန် သတင်း | | | Hits: 1342
ရခိုင်ပြည်သည် နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ တင့်တင့်တယ်တယ် ရပ်တည်လာခဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်၏ တိုးတက်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှုတို့မှာ ရခိုင်ပြည်သူတို့ အပေါ်သာ မူတည်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော်သော ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်၏ အဓိက လူမျိုးကြီး နှစ်ရပ်ဖြစ်သော ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် မြို၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ ချင်း၊ ခမိ စသည့် လူမျိုးစုတို့နှင့်အတူ မရှိအတူ၊ ရှိအတူ၊ အေးအတူ၊ ပူအမျှ၊ တရေတည်းသောက်ကာ တလှေတည်းစီးပြီး တမြေတည်း၌ပင် နေထိုင်လာခဲ့သည်။
ပိုမို လေ့လာ ဖတ်ရှုလိုပါက ဤ ကလိက်ကို နှိပ်ပါ
၁၁-ရာစု မတိုင်မီက အာရ်ကာန်(ရခိုင်)သမိုင်းအကျဉ်း
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ နယ်နမိတ် အတွင်းကျသည့် နယ်ပယ် ပိုင်နက်သို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရောက်ရှိ လာသော ပိုးမွှား အကောင်ပလောင်များ
This entry was posted on December 13, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရခိုင် ပဋိပက္ခ မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဟု ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ပြော
“လူမှုအဖွဲ့စည်းနှစ်ခု ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာလည်း အခက်အခဲပါပဲ” – U N က ရိုဟင်ဂျာလို့ ဘာကြောင့်ခေါ်သလဲ ? →